မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2015-03 > ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အပိုင်း (5)
နောက်ဆုံးသောကာလ၌ကျွန်ုပ်တို့တည်ရှိပြီးဖြစ်သော၊ မပြီးမြောက်သေးသောဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၏ရှုပ်ထွေးသောအမှန်တရားနှင့်အမှန်တရားတို့သည်ခရစ်ယာန်အချို့ကိုအောင်ပွဲခံရန်မည်သို့ ဦး ဆောင်ခဲ့သည်ကိုအခြားသူများကမူတိတ်ဆိတ်စွာနေစေခဲ့သည်။ ဒီဆောင်းပါးမှာဒီရှုပ်ထွေးတဲ့အမှန်တရားကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်တုန့်ပြန်တဲ့နည်းကိုကွဲပြားပါတယ်။
အောင်ပွဲခံခြင်း (ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ကို ဆောင်ကြဉ်းရန် ရည်မှန်းထားသည့် တက်ကြွမှု) သို့မဟုတ် ငြိမ်သက်ခြင်း (ဘုရားသခင်ထံတော်၌ ခပ်သိမ်းသော ကင်းစင်ခြင်း၏ အနှစ်သာရ) ကို စွဲကိုင်နေမည့်အစား ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို စစ်မှန်သောအသွင်သဏ္ဌာန်ဖြစ်စေသော မျှော်လင့်ချက်ရှိသော အသက်တာကို ဦးဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အား ခေါ်ဆိုပါသည်။ အနာဂတ်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၏ နိမိတ်လက္ခဏာများ။ မှန်ပါသည်၊ ဤနိမိတ်လက္ခဏာများသည် အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ အဓိပ္ပါယ်ရှိသည် - ၎င်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ကို မဖန်တီးကြသလို၊ ၎င်းတို့သည် ၎င်းကို ပစ္စုပ္ပန်နှင့် အစစ်အမှန်ဖြစ်အောင် မပြုလုပ်ကြပေ။ သို့သော်လည်း သူတို့သည် နောင်လာမည့်အရာဆီသို့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ကျော်လွန်သွားကြသည်။ အရာအားလုံးကို မလွှမ်းမိုးနိုင်ရင်တောင်မှ သူတို့က ဒီနေရာနဲ့ အခုမှာ ခြားနားချက်တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးတယ်။ သူတို့သည် ပြတ်ပြတ်သားသား ကွဲလွဲမှုမျိုးမဟုတ်ဘဲ ဆွေမျိုးတစ်ဦးအဖြစ် ဖန်တီးကြသည်။ ဤသည်မှာ ယခုလက်ရှိ ဆိုးယုတ်သောခေတ်တွင် အသင်းတော်အတွက် ဘုရားသခင်တောင်းဆိုချက်နှင့်အညီ ဖြစ်သည်။ အောင်မြင်သော သို့မဟုတ် ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်သော တွေးခေါ်နည်းကို စွဲစွဲမြဲမြဲ စွဲကိုင်လေ့ရှိသူအချို့သည် ဤအချက်ကို ဆန့်ကျင်ကြပြီး ဘုရားသခင်၏ အနာဂတ်နိုင်ငံတော်အတွက်သာ ရည်ညွှန်းသည့် နိမိတ်လက္ခဏာများကို ဝတ်ဆင်ရန် ခဲယဉ်းသည် သို့မဟုတ် လုံးဝမပြောထိုက်ကြောင်း ငြင်းခုံကြသည်။ သူတို့၏အမြင်အရ၊ ၎င်းတို့သည် ကမ္ဘာကို မတိုးတက်နိုင်လျှင် သို့မဟုတ် အနည်းဆုံး အခြားသူများကို ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်စေပါက ရေရှည်တည်တံ့သော ပြောင်းလဲမှုကို မဆောင်ကြဉ်းနိုင်လျှင် မထိုက်တန်ပါ။ သို့သော် ဤကန့်ကွက်မှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိသည်မှာ ခရစ်ယာန်များသည် ဤနေရာ၌ ထားနိုင်ပြီး ယခုအချိန်တွင် ဘုရားသခင်သည် အနာဂတ်နိုင်ငံတော်မှ သီးခြားခွဲထုတ်နိုင်သည့် ညွှန်ပြသည့် ယာယီနှင့် အချိန်ကန့်သတ်ထားသော နိမိတ်လက္ခဏာများကို ထည့်သွင်းထားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဘာလို့မဖြစ်ရမလဲ? အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ခရစ်ယာန်လုပ်ဆောင်မှုသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် သခင်ယေရှု၏အစဉ်တစိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်းတွင် ပါဝင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ငါတို့သည် ဤနေရာ၌ ရှင်ဘုရင်၏ အုပ်စိုးမှု၌ ရှင်ဘုရင်ကို ပေါင်းစည်းနိုင်သည်ဖြစ်၍ ယခုလည်း ဤပစ္စုပ္ပန်၊ ဆိုးယုတ်သော လောကကာလ၊ လွန်မြောက်မည့် ကာလဖြစ်သည်။ အနာဂတ်နိုင်ငံတော်၏ အရှင်သခင်သည် လက်ရှိခေတ်တွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်ပြီး အသင်းတော်၏ ညွှန်ပြထားသော၊ ယာယီနှင့် အချိန်အကန့်အသတ်ရှိသော သက်သေခံချက်များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤအရာများသည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော် ပြီးမြောက်ခြင်းနှင့်အတူ ပါ၀င်လာမည့် အရေးကြီးသော ပြောင်းလဲမှုအားလုံးကို မဆောင်ကြဉ်းသော်လည်း ဤနေရာနှင့် ယခုတွင် သိသာထင်ရှားသော ခြားနားမှုကို ဖြစ်စေသော်လည်း၊
ဘုရားသခင်၏ အနာဂတ်နိုင်ငံတော်၏ အလင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ရောက်ရှိပြီး ဤအမှောင်ကမ္ဘာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ထွန်းလင်းစေပါသည်။ ကြယ်ရောင်သည် ည၏အမှောင်ကို လင်းထိန်နေသကဲ့သို့၊ စကားနှင့် အကျင့်တွင်ပါရှိသော အသင်းတော်၏ နိမိတ်လက္ခဏာများသည် နေ့လယ်နေရောင်အပြည့်ဖြင့် ဘုရားသခင်၏ အနာဂတ်နိုင်ငံတော်ကို ညွှန်ပြနေသည်။ ဤသေးငယ်သော အလင်းတန်းများသည် အရိပ်အမြွက်မျှသာဖြစ်လျှင်ပင် ယာယီနှင့် ခေတ္တမျှ သက်ရောက်မှုရှိသည်။ အနန္တတန်ခိုးရှင်၏ သနားဖွယ်အမှုတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ လုပ်ဆောင်မှုတွင် လမ်းညွှန်ထားသော ကျွန်ုပ်တို့၏ နိမိတ်လက္ခဏာများနှင့် သက်သေများနှင့်အတူ ကိရိယာများ ဖြစ်လာကြသည်။ ဤနည်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် လူတို့ကို ထိတွေ့နိုင်ပြီး သူ၏အနာဂတ်နိုင်ငံတော်ဆီသို့ ခရစ်တော်နှင့်အတူ လိုက်ပါသွားနိုင်သည်။ ဘု​ရား​သ​ခင်​ကိုယ်​တိုင်​သည်​နိုင်​ငံ​တော်​အ​သက်​မ​ရောက်​မီ​နှင့်​ယခု​အ​ရပ်​၌​အ​လုပ်​ဆောင်​နေ​တော်​မူ​၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်အတွက် သံတမန်များဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့အားဖြင့် သတိပေးတော်မူသောကြောင့်၊2. ကောရိန္သု 5,20) သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သော ဟောပြောခြင်း နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် လူတို့အား ၎င်းတို့၏ အနာဂတ်နိုင်ငံတော်၏ နိုင်ငံသားများအဖြစ် ဝိညာဉ်တော်၌ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဤနိုင်ငံတော်တွင် ပါဝင်ရန် ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်သည် (ရောမ၊ 1,16) ခရစ်တော်၏နာမတော်၌ပူဇော်သော ရိုးရိုးရေခွက်တိုင်းသည် ဆုလာဘ်မခံရပေ။ (မဿဲ၊ 10,42) ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော်၏ ယုံကြည်သူများ၏ နိမိတ်လက္ခဏာများ သို့မဟုတ် သက်သေခံချက်များကို ခဏတာ ၊ အစစ်အမှန်မဟုတ်သေးသော သန့်ရှင်းသော သင်္ကေတများ သို့မဟုတ် အမူအရာများအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ မပယ်သင့်ပါ။ ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ နိမိတ်လက္ခဏာသတ်မှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို သူ၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွင် ထည့်သွင်းပြီး လူတို့ကို ကိုယ်တော်နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ဆက်ဆံရန် ကျွန်ုပ်တို့၏သက်သေခံချက်ကို အသုံးပြုစေသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည် သူ၏မေတ္တာပါသော အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် ရှိနေခြင်းကို ခံစားရပြီး သူ၏ တရားမျှတသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ပြည့်စုံသော အုပ်ချုပ်မှုမှတဆင့် ပျော်ရွှင်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့် မျှော်လင့်ချက်တို့ကို ခံစားကြရသည်။ ဤနိမိတ်လက္ခဏာများသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အနာဂတ်ဖြစ်လာမည့်အမှန်တရားတစ်ခုလုံးကို မဖော်ပြသော်လည်း ၎င်းကိုညွှန်ပြရုံသာဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။ ၎င်းတို့က - အတိတ်နှင့် အနာဂတ်တွင် နှစ်မျိုးစလုံးကို ဖော်ပြသည် - ထို့ကြောင့် သူ၏အသက်တာနှင့် မြေကြီးပေါ်ရှိ ဓမ္မအမှုတွင် ဖန်ဆင်းခြင်းအားလုံးအပေါ် ကယ်တင်ရှင်နှင့် ဘုရင်ဖြစ်ခဲ့သည့် ခရစ်တော်ကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ ဤနိမိတ်လက္ခဏာများသည် အတွေးများ၊ စကားလုံးများ၊ စိတ်ကူးများ သို့မဟုတ် လူတစ်ဦးချင်းစီ၊ ကိုယ်ပိုင်ဝိညာဉ်ရေးရာ၊ အတွေ့အကြုံများ။ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်း၏နိမိတ်လက္ခဏာများသည် အချိန်နှင့်နေရာ၊ အသွေးအသားဖြင့်၊ ယေရှုသည်မည်သူဖြစ်သည်နှင့် သူ၏အနာဂတ်နိုင်ငံတော်သည် မည်သို့မည်ပုံဖြစ်လာမည်အကြောင်း သက်သေခံနေပါသည်။ ၎င်းတို့သည် အချိန်နှင့်ငွေ၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု၊ တွေးခေါ်မှုနှင့် စီစဉ်မှု၊ တစ်ဦးချင်းနှင့် ရပ်ရွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတို့ လိုအပ်သည်။ အနန္တတန်ခိုးရှင်သည် သူ၏သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည့် ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြည့်စုံစေရန်၊ ခရစ်တော်၌ရှိသော ဘုရားသခင်ထံ ဦးတည်စေခြင်းငှာ ဤအရာကိုလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ထိုသို့သော နိဒါန်းသည် နောင်တ (နောင်တ သို့မဟုတ် ဘဝ၏ ပြောင်းလဲခြင်း) နှင့် ယုံကြည်ခြင်းတွင် ဖြစ်ထွန်းလာမည့် အပြောင်းအလဲပုံစံဖြင့် အသီးအနှံများ သီးလာပါသည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်၊ စွမ်းအင်၊ အရင်းအမြစ်များ၊ အရည်အချင်းများနှင့် အားလပ်ချိန်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်အား အသုံးပြုနိုင်ရန် ဖန်တီးပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်မှောက်ကမ္ဘာတွင် ငတ်မွတ်သူ၏ဒုက္ခကို တိုက်ဖျက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် တက်ကြွသောကတိကဝတ်များကို ကူညီပေးရန် ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ဤအသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် မပါဝင်သေးသော (သို့) မသက်ဆိုင်သေးသူများနှင့်လည်း လောကီဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုပုံစံကို ပုံဖော်သည်။ So Ask နှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ခံယူထားသော ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းသက်သေခံချက်သည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရလည်းကောင်း၊ နှုတ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း လူသိရှင်ကြားနှင့် စုပေါင်းလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ရနိုင်သော နည်းလမ်းအားလုံးကို အသုံးပြုသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသမျှ၊ လုပ်ဆောင်နိုင်သမျှနှင့် တူညီသောသတင်းစကားများကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ကာ ခရစ်တော်၌ ဘုရားသခင်မည်သူဖြစ်သည်ကို ကြွေးကြော်ပြီး ကိုယ်တော်၏အုပ်စိုးမှုကို အချိန်တိုင်းအာမခံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤနေရာနှင့် ယခုတွင်၊ အပြစ်ရှိသောကမ္ဘာတွင်ပင်၊ ခရစ်တော်နှင့်ဆက်ဆံကာ၊ ကိုယ်တော်၏အုပ်စိုးမှု၏ပြီးပြည့်စုံသောအဆုံးသတ်ခြင်းမျှော်လင့်ချက်ဖြင့် အသက်ရှင်နေထိုင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အနာဂတ်ကမ္ဘာတွင် ကောင်းကင်သစ်နှင့် မြေကြီးသစ်တစ်ခု၏ မျှော်လင့်ချက်များဖြင့် ပြည့်နှက်နေပါသည်။ ယေရှုခရစ်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ကိုယ်တော်၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုတို့ကြောင့် ဤကမ္ဘာကြီးဖြတ်သန်းနေပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပညာဖြင့် ဤအချိန်၌ ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ကြသည်။ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် ၎င်း၏ပြီးပြည့်စုံမှုတွင် နီးကပ်လာသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သေချာစွာအသက်ရှင်နေပါသည်- အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယင်းသည် အတိအကျဖြစ်သောကြောင့်ပင်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်ယာန်များအနေဖြင့်ပေးသောကျွန်ုပ်တို့၏သက်သေခံချက်သည်မစုံလင်၊ လိုအပ်ပြီးအချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသည်။ ၎င်းသည်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးအားလုံးအပေါ်သြဇာသက်ရောက်သောသဘောဖြင့်မှန်ကန်သည်၊ ဤတွင်နှင့်ယခုအချိန်အထိသေးပြီးပြည့်စုံခြင်းမရှိသေးပါ။ လူတို့အားယေရှုခရစ်နှင့်သူ၏အနာဂတ်နိုင်ငံတော်အကြောင်းလူတို့သိရှိစေရန်ဘုရားသခင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသည့်ဘုရားသခင်၏မုန်ညင်းတော်အားဖြင့်မုန်ညင်းစေ့မျှဝေပေးသောသဘောဖြင့်မှန်ကန်သည်။ ယနေ့ဘုရားသခင့်အလိုတော်နှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်၏နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံတော်၏ကောင်းချီးများအကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝလမ်းစဉ်၏လူမှုရေးနှင့်လူမှုရေးမူဘောင်များတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။
ဤအချက်ကိုအနည်းငယ်ရှင်းလင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ရပ်များအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်၏အုပ်ချုပ်မှုအတွက်အုတ်မြစ်ချရန်မဟုတ်သကဲ့သို့၎င်းကိုမျှတမှုမရှိကြောင်းထောက်ပြသင့်သည်။ ဘုရားသခင်၊ ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ဤအရာကိုပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သည်။ အနာဂတ်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည်အမှန်တကယ်တည်ရှိပြီး ဖြစ်၍ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာသည်။ သူပြန်လာတာကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ချပါတယ်။ ကျနော်တို့ကအပေါ်ရေတွက်နိုင်ပါတယ်။ ဤအချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မတည်ပါ။ ၎င်းသည်ဘုရားသခင်၏လက်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဆိုရင်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ကိုမအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့သက်သေထွက်ဆိုချက်၊ ပုံသဏ္giveာန်ပေးတဲ့နိမိတ်လက္ခဏာများကိုကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်သလဲ။ အဖြေမှာကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်ထားသောကျွန်ုပ်တို့၏နိမိတ်လက္ခဏာများသည်လာမည့်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ကိုအပိုင်းအစများဖြင့်ဖော်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိတာဝန် - ကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်ထူး - ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်အပြုအမူအားသက်သေထူရန်ဖြစ်သည်။
သို့ဆိုလျှင် အဆုံး၊ ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာခြင်းသည် အဘယ်အရာဖြစ်မည်နည်း။ သူ၏ ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းသည် ထိုအချိန်မတိုင်မီအထိ လိုအပ်သောအလားအလာများသာ ပါ၀င်နေသကဲ့သို့ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အတွက် ပရမတ်အမှန်ကို မပေးဆောင်ပါ။ ယနေ့ ပြီးပြည့်စုံသော အဖြစ်မှန်ဖြစ်နေပါပြီ။ သခင်ယေရှုခရစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးနှုတ်ရှင်နှင့် ဘုရင်ဖြစ်နေပါပြီ။ စည်းကမ်းရှိတော်မူသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် ယခုအချိန်အထိ ဖုံးကွယ်ထားဆဲဖြစ်သည်။ သူ၏ အုပ်ချုပ်မှု နယ်ပယ် အပြည့်အစုံသည် ၎င်း၏ အလုံးစုံ ပြည့်စုံသော ပစ္စုပ္ပန် ဆိုးယုတ်သော ခေတ်တွင် မဖြစ်ထွန်းပေ။ ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာသောအခါ၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် ၎င်း၏အကျိုးဆက်များနှင့်အတူ ပြီးပြည့်စုံသော ထင်ရှားလိမ့်မည်။ သူပြန်ပေါ်လာခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်ပေါ်လာခြင်း (သူ၏ parousia) သည် ဗျာဒိတ်တော် သို့မဟုတ် ထုတ်ဖော်ခြင်း (နိယာမတရားတစ်ခု) ဖြင့် လိုက်ပါသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ သူသည် မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်နှင့် သူပြီးမြောက်အောင်မြင်ခဲ့သည့် အမှန်တရား၏ တကယ့်အမှန်တရားသည် ထိုအချိန်တွင် ခရစ်တော်သည် မည်သူဖြစ်သနည်း၊ အဘယ်အရာဖြစ်လာမည်နည်း၊ ကယ်တင်ခြင်းအလို့ငှာ၊ လူအပေါင်းတို့အား ထင်ရှားစေခြင်းငှါ၊ ယေရှုခရစ်၏ ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ဓမ္မအမှုတို့ကို အဆုံးစွန်တွင် ထင်ရှားစေလိမ့်မည်။ ဤအရာအားလုံး၏ ဘုန်းအသရေသည် နေရာတိုင်းတွင် ထွန်းလင်းတောက်ပနေမည်ဖြစ်ပြီး ထို့ကြောင့် ၎င်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အပြည့်အဝ ဖြစ်ထွန်းစေသည်။ အရိပ်အမြွက်မျှသာ၊ ယာယီနှင့် အချိန်အကန့်အသတ်ရှိသော သက်သေခံခြင်း၏အချိန်သည် ပြီးလိမ့်မည်။ ဘု​ရား​သ​ခင်​၏​နိုင်​ငံ​တော်​သည်​နောက်​တစ်​ဖန် ဝှက်​ထား​လိမ့်​မည်​မ​ဟုတ်။ ငါတို့သည် ကောင်းကင်သစ်နှင့် မြေကြီးသစ်ထဲသို့ ဝင်ကြလိမ့်မည်။ လက်မှတ်အတွက် မလိုအပ်တော့ပါ။ အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့ရှိသမျှသည် မျက်စိဖြင့် အမှန်အတိုင်း မြင်ကြလိမ့်မည်။ ဤအရာအားလုံးသည် ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာချိန်တွင် ဖြစ်လိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့် ခရစ်ယာန်အသက်တာသည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၏ အလားအလာကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်လာရန် အကြောင်းမဟုတ်ပါ။ အပြစ်ရှိသောကမ္ဘာ၏အဖြစ်မှန်နှင့် မြေကြီးပေါ်ရှိ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၏စံနမူနာကြားကွာဟချက်ကို ပိတ်ရန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်မဟုတ်ပါ။ အနန္တတန်ခိုးရှင်၏ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကြောင့် ကွဲကြေပျက်စီးနေသော၊ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော ဖန်ဆင်းခြင်း၏အဖြစ်မှန်ကို ဖယ်ရှားပြီး ၎င်းကို ကမ္ဘာသစ်၏စံနှုန်းဖြင့် အစားထိုးခြင်းမဟုတ်ပါ။ မဟုတ်ဘူး၊ ယေရှုဟာ ဘုရင်အားလုံးရဲ့ဘုရင်ဖြစ်ပြီး သခင်အားလုံးရဲ့သခင်ဖြစ်ပြီး၊ သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာ ဖုံးကွယ်ထားဆဲဖြစ်ပေမယ့်၊ တကယ်အမှန်တကယ်တည်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စပါပဲ။ ပစ္စုပ္ပန်၊ ဆိုးယုတ်သောကမ္ဘာသည် လွန်သွားလိမ့်မည်။ ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်ပြန်ခြင်း၊ ပုံပျက်ပန်းပျက်၊ အတုအယောင် ဖောက်ပြန်သော ဘုရားသခင်၏ ဖန်ဆင်းခြင်းဆိုင်ရာ အတုအယောင် သရုပ်သဏ္ဍာန်ဖြင့် လက်တွေ့ဘဝတွင် နေထိုင်နေသကဲ့သို့ ခရစ်တော်သည် ၎င်းကို လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ကာ မကောင်းမှု၏ တွန်းအားများကို အနိုင်ယူခြင်းဖြင့် ပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၊ ၎င်းသည် ဘုရားသခင်၏ အဆုံးစွန်သော အစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ၎င်း၏ မူလရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း နေထိုင်နိုင်သည်။ ခရစ်တော်၏ကျေးဇူးကြောင့်၊ ဖန်ဆင်းခြင်းအားလုံးသည် ကျွန်ခံခြင်းမှ လွတ်မြောက်ပြီး ၎င်း၏ညည်းတွားသံများ ဆုံးခန်းတိုင်လိမ့်မည် (ရောမ 8,22) ခရစ်တော်သည် အရာအားလုံးကို အသစ်ဖြစ်စေသည်။ အဲဒါက အရေးကြီးတဲ့ အမှန်တရားပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီအဖြစ်မှန်ကို အပြည့်အဝ မဖော်ပြသေးပါဘူး။ ယခုပင်၊ ယခုပင်၊ ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ လှုံ့ဆော်မှုကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုအနာဂတ်အမှန်တရားနှင့် ပတ်သက်၍ ဘဝ၏ နယ်ပယ်အားလုံးတွင် ယာယီနှင့် ယာယီ သက်သေခံနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖြစ်နိုင်ချေမျှသာကို သက်သေမပြနိုင်သည်မှာ သေချာပါသည်။ ခရစ်တော်နှင့် သူ၏ ရှင်ဘုရင်အတွက်မူကား၊ တနေ့တွင် စုံလင်စွာ ပေါ်ထွန်းလာမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိမြင်ပါသည်။ ဤအမှန်တရားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သည် - ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်လုပ်နေသကဲ့သို့ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်နေပါသည်။
အရပ်ဘက်နှင့် နိုင်ငံရေးပတ်ဝန်းကျင် ခရစ်တော်၏အုပ်စိုးမှုကို အသိအမှတ်ပြုပြီး ကြွလာမည့်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် အသက်ရှင်နေသော ခရစ်ယာန်များအတွက် အရပ်ဘက်နှင့် နိုင်ငံရေးအဆင့်တွင် အဘယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိသနည်း။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တစ်ဦးအား ချာ့ချ်ဝန်ဆောင်မှုပြင်ပရှိ နိုင်ငံရေး ပါတီ၊ နိုင်ငံ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ “အာဏာသိမ်းခြင်း” ဟူသော အယူအဆကို သမ္မာကျမ်းစာက မထောက်ခံပါ။ သို့သော် ၎င်းသည် “ခွဲထွက်ရေး” ဟူသော အသုံးအနှုန်းကို စွက်ဖက်ခြင်းမပြုရန်လည်း မတောင်းဆိုပေ။ ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအပြစ်နှင့် ယိုယွင်းနေသော ဤလောကနှင့် ကင်းကွာနေသင့်သည်ဟု ဟောကြားခဲ့သည်။7,15) ထူးဆန်းသောပြည်၌ ပြည်နှင်ဒဏ်ခံရစဉ် အစ္စရေးလူမျိုးတို့သည် သူတို့နေထိုင်ရာမြို့များကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရန် စွဲချက်တင်ခံခဲ့ရသည်။9,7) ဒံယေလသည် အယူမှားယဉ်ကျေးမှုအလယ်တွင် ဘုရားသခင်အား ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခဲ့ပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်အပေါ် သစ္စာစောင့်သိသည်။ ပေါလုသည် အစိုးရအတွက် ဆုတောင်းရန်နှင့် ကောင်းမှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး မကောင်းမှုကို တားဆီးသည့် လူ့စွမ်းအားကို လေးစားရန် ကျွန်ုပ်တို့အား တိုက်တွန်းထားသည်။ စစ်မှန်သောဘုရားသခင်ကို မယုံကြည်သေးသူများကြားတွင်ပင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဂုဏ်သတင်းကောင်းကို ထိန်းသိမ်းထားရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကိုယ်တော်ညွှန်ကြားထားသည်။ ဤသတိပေးစကားများသည် နိုင်ငံသားတစ်ဦးအနေနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာမူဘောင်တွင် တာဝန်ရှိသည်ဟု ယူဆရသည့်အထိ အဆက်အသွယ်များနှင့် စိတ်ဝင်စားမှုကို ရည်ညွှန်းပြီး ပြီးပြည့်စုံသော သီးခြားခွဲထားခြင်းမရှိပေ။
သမ္မာကျမ်းစာသွန်သင်ချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤကမ္ဘာ့ခေတ်ကာလ၏ နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ပြသည်။ သို့သော် တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ ပို၍အရေးကြီးသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၏ နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြောင်း ကြွေးကြော်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် ရှင်ပေါလုက သူ၏စာများတွင် ဤသို့ဖော်ပြထားသည်– “သင်တို့သည် ဧည့်သည်ဖြစ်ကြ၍ သူစိမ်းမဟုတ်တော့ဘဲ၊ သန့်ရှင်းသူ၏သားချင်း၊ ဘုရားသခင်၏အိမ်ထောင်စုဝင်များဖြစ်ကြသည်” (ဧဖက်၊ 2,191) "ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်သည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသည်။ သခင်ယေရှုခရစ်၏ ကယ်တင်ရှင်ကို ငါတို့သည် အဘယ်က မျှော်လင့်ကြသနည်း။” (ဖိလိပ္ပိ၊ 3,20) ခရစ်ယာန်များသည် လောကီအရာအားလုံးထက် သာလွန်ကောင်းမွန်မည်မှာ သေချာသော နိုင်ငံသားအသစ်တစ်ခုရှိသည်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ရဲ့ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဟောင်းကို ဖျက်ပစ်တာမဟုတ်ဘူး။ အကျဉ်းကျနေစဉ်တွင် ပေါလုသည် ၎င်း၏ရောမနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကို မငြင်းဆိုဘဲ လွတ်မြောက်လာစေရန်အတွက် ၎င်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ခရစ်ယာန်များအနေနှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားဟောင်းဖြစ်ခြင်း—ခရစ်တော်၏အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသည်—၎င်း၏အဓိပ္ပာယ်အားဖြင့် ပြင်းထန်စွာပြန်လည်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပါသည်။ ဤတွင်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အလျင်အမြန်ဖြေရှင်းချက် သို့မဟုတ် ပြဿနာ၏ရိုးရှင်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် ရှုပ်ထွေးသောပြဿနာတစ်ရပ်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့လာရသည်။ သို့သော် ယုံကြည်ခြင်း၊ မျှော်လင့်ချက်နှင့် ချစ်ခြင်းက ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံတော်နှင့် ခရစ်တော်၏အုပ်စိုးမှုကို သက်သေခံခြင်းအတွက် ရှုပ်ထွေးမှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် လမ်းညွှန်ပေးပါသည်။
Karl Barth ၏ ကျမ်းစာသွန်သင်ချက်၏ အကျဉ်းချုပ်နှင့် ခေတ်ကာလတစ်လျှောက် ချာ့ခ်ျသွန်သင်ခြင်းကို သတိရပြီးနောက်တွင်၊ ခရစ်တော်နှင့် သူ၏နိုင်ငံတော်နှင့် သက်ဆိုင်သူများသည် တစ်ချိန်တည်းတွင် မတူညီသောအသင်းတော်နှစ်ခုရှိကြသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် နိုင်ငံသားနှစ်မျိုးရှိသည်။ ဤရှုပ်ထွေးသောပြဿနာသည် ကမ္ဘာနှင့်ထပ်တူဖြစ်နေသော သမ္မာတရားနှင့် တွဲလျက်ရှိနေသောကြောင့် မလွှဲမရှောင်သာဖြစ်နေပုံရသည်၊ သို့သော် နောက်ဆုံးတွင် တစ်ခုသာဖြစ်သော အနာဂတ်သည် အောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတစ်ခုစီတိုင်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော တာဝန်ဝတ္တရားများကို ယူဆောင်လာကာ ၎င်းတို့သည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ပဋိပက္ခဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ၎င်းကို လက်မှမလွှတ်နိုင်ပါ။ အထူးသဖြင့်၊ နှစ်ခုစလုံးအတွက် ပေးစရာကိစ္စကြောင့် သတ်မှတ်ထားသောစျေးနှုန်းကို ပေးဆောင်မည်မဟုတ်ကြောင်း အာမခံချက်မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ယေရှုသည် မိမိ၏တပည့်များအား ဤသို့ထောက်ပြခဲ့သည်– “သင်တို့မူကား သတိထားကြလော့။ အကြောင်းမူကား၊ သူတို့သည် သင့်အား တရားစရပ်တို့၌ အပ်ပေး၍၊ တရားစရပ်တို့၌ ဒဏ်ခတ်ခြင်းကို ခံရ၍၊ ငါ့အတွက်ကြောင့် မင်းများတို့အား သက်သေအဖြစ် ရှင်ဘုရင်များထံ ပို့ဆောင်ကြလိမ့်မည်။” (မာကု ၁၊3,9) ယေရှုကိုယ်တော်တိုင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကို ရောင်ပြန်ဟပ်ပြီး အလားတူအခြေအနေတွေကို တမန်တော်ကျမ်းတစ်လျှောက်မှာ ခြေရာခံထားတယ်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး နှစ်ခုကြား ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သဖြင့် ဤပစ္စုပ္ပန်လောကတွင် လုံးဝဖြေရှင်းရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။
ဤတာ ၀ န် ၀ တ္တရားနှစ်ခုစလုံးနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်သင့်သည်ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းတို့သည်တစ်ခါတစ်ရံတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ပconflictိပက္ခဖြစ်နေလျှင်ပင်သူတို့ကိုပြိုင်ဆိုင်မှုဟုသတ်မှတ်ခြင်းသည်အသုံးမဝင်ပါ။ ၎င်းတို့အားအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းကိုကြည့်ခြင်းကအထောက်အကူမပြုသကဲ့သို့ ဦး စားပေးအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်နောက်ဆက်တွဲတွက်ဆမှုများအမြဲတမ်းရှိသည့်နေရာတွင်ဆိုလိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာဒုတိယသို့မဟုတ်တတိယအရေးယူမှုသို့မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ဦး စားပေးအပြည့်အ ၀ အာရုံစိုက်ပြီးမှသာလျှင်ယူသည်။ ရှိသည်။ ဤကိစ္စတွင်ဒုတိယအဆင့်ကြေငြာထားသောတာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုများစွာသောလျှင်မဟုတ်လျှင်များစွာသောအားဖြင့်နောက်ဆုံးတွင်လျစ်လျူရှုခံထားရသည်ဟူသောအချက်ကိုပြသသည်။
ထို့အပြင်အနည်းငယ်ပြုပြင်ထားသောအဆင့်ဆင့်အဆင့်ဆင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်မရှိပါ။ ဒုတိယပြsecondaryနာများကို ဦး စားပေးမှုများမှဖယ်ထုတ်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤစနစ်အရကျွန်ုပ်တို့သည်စီရင်စုနယ်အတွင်းရှိအဓိကတာ ၀ န်များကိုတာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ရန်သေချာစေပြီး၊ ပြည်သူ့စီရင်စုနယ်အတွင်းရှိအလယ်တန်းများအပေါ်တရားမျှတမှုရှိစေရန်၎င်းတို့သည်အတော်အတန်လွတ်လပ်မှုရှိသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်စံချိန်စံညွှန်းများ၊ ချာ့ချ်မဟုတ်သောwithinရိယာအတွင်းကြည့်သည်။ ဤသို့သောချဉ်းကပ်မှုသည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည်ဤလောကကို ၀ င်ရောက်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်ကာလတစ်ခုနှင့်တစ်ခုထပ်တူကျနေသောကြောင့်အသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းဟူသောအချက်ကိုတရားမျှတမှုမရှိသောကဏ္dခွဲတစ်ခုဆီသို့ ဦး တည်စေသည်။ ချာ့ချ်သက်သေခံခြင်း၏ ဦး စားပေးတာဝန်များသည်အမြဲတန်းဒုတိယ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာ့အသိုင်းအဝိုင်းအပေါ်မည်သို့ချဉ်းကပ်သည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ လုပ်ငန်းတာဝန်နှစ်ခုသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုထပ်နေသည်။ အနာဂတ်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သက်သေခံခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးသည် ဦး စားပေးဖြစ်ရမည်။ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည်ကွယ်ဝှက်ထားသောသို့မဟုတ်အလယ်တွင်ဆက်လက်တည်ရှိတော့မည်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၏အုပ်စိုးမှု၊ ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းခြင်းအားလုံးကိုရည်ညွှန်းသောကံကြမ္မာ၏စည်းလုံးမှု၊ ခရစ်တော်အောက်၌ဘုရင်များနှင့်သခင်တို့၏သခင်အဖြစ်အရာခပ်သိမ်းပြီးမြောက်ခြင်းအားဖြင့်အနန္တတန်ခိုးရှင်၏တာ ၀ န်သည်အဖြစ်မှန်အားလုံး၏အချက်အချာဖြစ်သည်။ ၂ လူ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုစီစဉ်ခြင်း၊ စနစ်တကျတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဤဗဟိုအချက်အခြာနေရာတွင်ချထားသင့်သည်။ ၎င်းကိုလုံး ၀ သက်ဆိုင်သင့်သည်။ သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူဘုရားသခင့်အလယ်၌တူညီသောအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုစီ၏အဓိကအာရုံကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ။ ယေရှုခရစ်သည်သူ၏အနာဂတ်နိုင်ငံတော်နှင့်ဤဗဟိုဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်နှင့်သက်ဆိုင်သောချာ့ချ်သည်သူ့ကိုတစ်ယောက်တည်းသိပြီးရိုသေလေးစားပြီးဗဟိုပတ် ၀ န်းကျင်၏အလယ်တွင်ရှိသည်။ ဘုရားကျောင်းကဒီစင်တာကိုသိတယ်။ သူမသည်အနာဂတ်အင်ပါယာ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုသိသည်။ သူမ၏မျှော်လင့်ချက်သည်ခိုင်မာသည့်မြေပေါ်တွင်အခြေပြုပြီးသူမသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏အနှစ်သာရကိုမှန်ကန်သောစိတ်ကူးမှသည်တရားမျှတမှုမှခရစ်တော်၏လူများ၏အသိုင်းအ ၀ ိုင်းအထိမှန်ကန်သောအတွေးအခေါ်ရှိသည်။ သူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုမှာဤစင်တာကိုမြင်နိုင်စေရန်နှင့်အခြားသူများအားဤဗဟိုစက်ဝိုင်းထဲ ၀ င်ရန်တောင်းဆိုခြင်းသည်သူတို့၏ဘ ၀ နှင့်မျှော်လင့်ချက်၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အားလုံးသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုလုံးမှပိုင်ဆိုင်သင့်သည်။ ၎င်းတို့တည်ရှိမှု၏ဗဟိုသည်ချာ့ချ်၏တည်ရှိမှု၏ဗဟိုပင်ဖြစ်သည်၊ သူတို့၏သစ္စာရှိမှုတာ ၀ န် ၀ တ္တရားသည်လူအများနှင့်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအဓိပ္ပာယ်သက်ဆိုင်သည်ဆိုလျှင်ပင်။ ဘုရားသခင်သည်မိမိ၏ကံကြမ္မာအရခရစ်တော်၌ဘုရားသခင်သည်အရာခပ်သိမ်း၏ဗဟိုဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်သည်တန်ခိုးတော်နှင့်ပညတ်တော်အလုံးစုံတို့ကိုဖန်ဆင်း။ အလုံးစုံတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ဖြစ်သည်၊
ဘုရားကျောင်းအပြင်ဘက်ရှိ မြို့ပြရပ်ကွက်ကို ရပ်ကွက်အဝိုင်းနှင့် ပိုဝေးသော အကွာအဝေးတွင်ရှိသော အဝိုင်းအဖြစ် ယူဆနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ဗဟိုအကြောင်းလည်းမသိ၊ ၎င်းကိုအသိအမှတ်မပြုဘဲ၊ ဘုရားသခင်ပေးသောတာဝန်မှာ ၎င်းကိုထင်ရှားစေရန်အတွက် မပါဝင်ပါ။ ၎င်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ သာသနာ့တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရန် သို့မဟုတ် ၎င်းကို အစားထိုးရန် မဟုတ်ဘဲ (နာဇီဂျာမနီတွင် ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီး ဂျာမန်နိုင်ငံတော် ချာ့ခ်ျခေါင်းဆောင်များမှ အတည်ပြုခဲ့သည့်အတိုင်း)။ သို့သော် အသင်းတော်သည် ယခင်ကဲ့သို့ ကြီးမားသောအသင်းတော်တစ်ခုအဖြစ် ၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို မယူသင့်ပါ။ သို့သော် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မြို့ပြသာသနာ့နယ်မြေသည် ၎င်းနှင့်တူညီသောအချက်အချာဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ကံကြမ္မာသည် ယေရှုနှင့် လုံးလုံးလျားလျားဆက်စပ်နေပြီး၊ သခင်သည် အချိန်နှင့်နေရာ၊ သမိုင်းအားလုံးနှင့် အခွင့်အာဏာအားလုံးကို အုပ်စိုးတော်မူ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သိသည့်အတိုင်း အရပ်ဘက်အသင်းတော်သည် အသင်းတော်မှ အသိအမှတ်ပြုသည့် တူညီသောနေထိုင်မှုအဖြစ်မှန်နှင့် သစ္စာစောင့်သိမှု၏ အန္တိမတာဝန်ဖြစ်သည့် ဘုံဗဟိုနှင့် သီးခြားမဟုတ်ပေ။ သခင်ယေရှုနှင့် သူ၏အနာဂတ် စိုးစံသည်။ သွယ်ဝိုက်၍သော်ငြား ဘုံဗဟိုအဖြစ်မှန်ကိုရည်ညွှန်းသည့် သွယ်ဝိုက်၍သော်ငြားလည်း ထိုဘုံဗဟိုအဖြစ်မှန်ကို ရည်ညွှန်းသည့် လုပ်ဆောင်ချက်အစီအစဥ်များ၊ ဖြစ်တည်မှုပုံစံများနှင့် အများသူငှာ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ဖြစ်နိုင်ခြေများကို ထိုပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အသင်းတော်အတွင်း ပုံဖော်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်းဖြင့် ဤတာဝန်ကို တရားမျှတစေသည်။ ကျယ်ပြန့်သော တာဝန်ဝတ္တရားများတွင် ပါဝင်လာသည့် ဤဘဝလမ်း၏ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများသည် သာသနာပြုကျင့်စဉ်တွင် ၎င်းတို့၏ သံယောင်ယောင်များကို တွေ့ရလိမ့်မည် သို့မဟုတ် ယင်းနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့်သာ ဝိုးတိုးဝါးတား ဖော်ပြနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မဖြစ်သေးဘဲ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မပြနိုင်သေးပေ။ သို့သော် ယင်းသည် မျှော်လင့်ရမည့်အရာဖြစ်သည်။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအသင်းတော်သည် အသင်းတော်မဟုတ်သင့်ပါ။ သို့ရာတွင် ၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များသည် ၎င်းအတွက်ရော သခင်အား တာဝန်ခံရန် ကြိုးပမ်းနေသောကြောင့် ၎င်းမှ ဆက်လက်အကျိုးရှိသင့်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤပစ္စုပ္ပန်၌ရွေ့လျားနေသည်ဟူသောအချက်သည်မကောင်းသောကမ္ဘာအချိန်သည်အနာဂတ်ကမ္ဘာကြီးကိုမျှော်လင့်ချက် ထား၍ အသက်ရှင်နေသည့်စင်တာကိုသိပြီးကိုးကွယ်ကိုးကွယ်သူများ၏ကျယ်ပြန့်သောဘူဂေးရီးယားရှိသူများအတွက်အထူးသဖြင့်ရှင်းနေပါသည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဘုရားသခင်နှင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း၏ဘာသာရေးဆိုင်ရာအုတ်မြစ်များနှင့် ၀ ိညာဉ်ရေးရာအရင်းအမြစ်များသည်ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်း၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများတွင်လူထုလှုပ်ရှားမှုများမှထင်ရှားစွာပြသခြင်း၊ သို့သော်ထိုကျယ်ပြန့်သောဒေသရှိဓလေ့ထုံးတမ်းများ၊ စံနှုန်းများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ဥပဒေများ၊ ဖြစ်တည်မှုနှင့်အမူအကျင့်များသည်ခရစ်တော်၌ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဘုရားသခင်ပေးထားသောဘဝနှင့်အတူတူသို့မဟုတ်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်သည်။ ခရစ်ယာန်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသည်ကျယ်ပြန့်သောတာ ၀ န် ၀ တ္တရားကိုပေါင်းစည်းရန်နှင့်တတ်နိုင်သမျှဘုရားသခင့်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်နည်းလမ်းများနှင့်အကောင်းဆုံးသဟဇာတဖြစ်သောအဖွဲ့အစည်းပုံစံများ၊ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာမူများနှင့်အလေ့အကျင့်များကိုတတ်နိုင်သမျှအကောင်အထည်ဖော်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲလိမ့်မည်။ တစ်နေ့တာတစ်ခုလုံးပေါ်လာလိမ့်မည်။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်သောချာ့ချ်သည်သြတ္တပ္ပစိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းအားဘုရားသခင့်ကံကြမ္မာနှင့်လူသား၏ရည်ရွယ်ချက်များမှထပ်မံကျဆင်းသွားခြင်းကိုတားဆီးရန်ကြိုးစားသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ကြေငြာချက်မှတဆင့်သာမကစျေးနှုန်းမပေးဘဲနှင့်ကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်ခြင်းအားဖြင့်လည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ အပြောနှင့်အပြုအမူအားဖြင့်သူမသည်သူမ၏ဉာဏ်ပညာ၊ သတိပေးချက်များနှင့်ကတိက ၀ တ်များကိုတစ်ခါတစ်ရံလျစ်လျူရှုခြင်းသို့မဟုတ်ငြင်းပယ်ခြင်းခံရလျှင်ပင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
ချာ့ခ်ျအဖွဲ့ဝင်များသည် ၎င်းတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို တွန်းအားပေးမှုတစ်မျိုး သို့မဟုတ် တောက်ပသော စံနမူနာတစ်ခုအဖြစ် ခရစ်တော်၏ ဧဝံဂေလိတရားမှ ကျွေးမွေးသော အဖွဲ့အစည်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများမှတစ်ဆင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လူမှုရေးအကျိုးကျေးဇူးများဖြင့် ကြွယ်ဝစေနိုင်သည်။ သို့သော် ထိုသို့သောသက်သေခံချက်သည် တိုက်ရိုက်၊ ဝိညာဉ်ရေးအလုပ်နှင့် အသင်းတော်၏သတင်းစကား၊ ခရစ်တော်၌ရှိသော ဘုရားသခင်၊ မျက်မှောက်တော်နှင့် သူ၏နိုင်ငံတော်ကြွလာခြင်းတို့ကိုသာ သွယ်ဝိုက်ကိုးကားချက်အဖြစ်သာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ သွယ်ဝိုက်သောလက္ခဏာများအဖြစ် လုပ်ဆောင်သော ဤဖန်တီးမှုကြိုးပမ်းမှုများသည် အသင်းတော်၏အသက်တာ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ဗဟိုသတင်းစကားနှင့် အလုပ်တို့ကို အစားထိုးခြင်းမပြုသင့်ပါ။ သခင်ယေရှု၊ ဘုရားသခင် သို့မဟုတ် သန့်ရှင်းသောကျမ်းဂန်များကိုပင် လုံး၀ဖော်ပြလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ခရစ်တော်၏ ဩဘာသည် လုပ်ဆောင်ချက် သို့မဟုတ် ပြီးမြောက်အောင်မြင်မှုတို့ကို လိုက်နာသော်လည်း၊ ဤလုပ်ဆောင်ချက်များကို ကျွေးမွေးသည့် အရင်းအမြစ်ကို (လုံးဝလျှင်) အမည်တပ်ရန် ခဲယဉ်းပါလိမ့်မည်။ ထိုသို့သော သွယ်ဝိုက်သော အထောက်အထားများအတွက် ကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် အသင်းတော်၏ တိုက်ရိုက်သက်သေခံချက်နှင့် အလုပ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပို၍ရှင်းလင်းပြတ်သားဖွယ်ရှိသည်။ ရလဒ်များသည် အခြေခံအသင်းတော်စကားလုံးနှင့် သက်သေခံချက်များထက် ပို၍ကွဲလွဲနေဖွယ်ရှိသည်။ တခါတရံတွင် အများအကျိုးကို ထိခိုက်စေသော ခရစ်ယာန်များ တင်ပြသော အဆိုပြုချက်များကို အစိုးရ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိက အာဏာပိုင်များ၊ သြဇာလွှမ်းမိုးမှု နယ်ပယ်များနှင့် သာဓကများက လက်ခံခြင်း မရှိသော်လည်း ၎င်းတို့သည် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ကန့်သတ်ထားသည့် ပုံစံဖြင့်သာ ပါဝင်လာသည်။ ထို့နောက်တွင်၊ ၎င်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အတွက် ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော သက်ရောက်မှုရှိစေမည့် နည်းလမ်းဖြင့် ၎င်းတို့ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါစေ။ ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ဖက်ဒရယ်အကျဉ်းထောင်များတွင် အလုပ်လုပ်သော Chuck Colson's Prison Fellowship ၏ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာအလုပ်သည် စံနမူနာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း မည်မျှသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သည်ကို ခန့်မှန်းရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ အချို့သော အောင်မြင်မှုများသည် စိတ်ပျက်စရာကောင်းလောက်အောင် အချိန်တိုနိုင်သည်။ ရှုံးနိမ့်မှုတွေလည်း ရှိမယ်။ သို့သော် အဝေးမှပင်၊ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့် အနှစ်သာရကို ထင်ဟပ်စေသည့် ဤသွယ်ဝိုက်သက်သေခံချက် ပေးခံရသူများသည် အသင်းတော်ကမ်းလှမ်းသောအရာ၏ အနှစ်သာရဆီသို့ ဦးတည်သွားကြသည်။ ထို့ကြောင့် သက်သေခံချက်များသည် ဧဝံဂေလိအကြို ချပ်ဝတ်တန်ဆာတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
ပတ် ၀ န်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်း၏အဓိကတာ ၀ န်မှာကောင်းမွန်သော၊ တရားမျှတသောအမိန့်ကိုချထားပေးရန်ဖြစ်သည်။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုသူမ၏လိုအပ်သော ၀ ိညာဉ်ရေးရာအခန်းကဏ္fulfillကိုယုံကြည်မှုအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုအနေနှင့်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ပြည်သူ့တရားမျှတမှုကိုသေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်ဘုံကောင်းသောဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်အားနည်းသူများ၏အားသာချက်ကိုမယူရန်ဂရုစိုက်သည်။
ပေါလုသည် ရောမ ၁၃ မှပေးစာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်သကဲ့သို့ လောကီအာဏာပိုင်များအတွက် မှန်ကန်သောတာဝန်များကို ဖော်ပြသောအခါတွင် ပေါလုသည် ယင်းကို စိတ်ထဲတွင်ရှိပုံရသည်။ “ထို့ကြောင့် ဧကရာဇ်မင်းမြတ်အား ဧကရာဇ်မင်းအား ပေးကမ်းလော့။ ဘုရားသခင်အား ပေးတော်မူပါဘုရား” ဟုပြောသောအခါ ယေရှုဆိုလိုရာကို ထင်ဟပ်စေပေမည်။ (မဿဲ ၂2,21) နှင့် ပေတရုက သူ၏စာတွင် ဖော်ပြလိုသည်– “လူဆိုးတို့ကို ဒဏ်ခတ်ခြင်းနှင့် ချီးမွမ်းခြင်းငှာ ရှင်ဘုရင်ဖြစ်စေ ဘုရင်ဖြစ်စေ ဘုရင်ခံဖြစ်စေ သခင်ဘုရား၏အကျိုးငှာ လူသားအားလုံး၏အမိန့်ကို လိုက်နာစေ။ ဘယ်သူက ကောင်းတာလဲ”1. ဓာတ်ဆီ 2,13-14) ။